“MERKIORA” : Olom-boafidy roa nahazoan’ny jiolahy mpisoloky 27 tapitrisa Ariary
Nahavoafitaka olom-boafidy roa tamin’ny filazana fa manana merkiora indray ireo jiolahy mpisoloky. 14 septembre 2020
Vola 27 Ariary be izao no azon’ireo olon-dratsy tamin’izany.
Taorian’ny vela-pandrika napetraky ny Zandary avy ao amin’ny Borigadin’i Betroka, dia fantatra tamin’ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana fa sarona, tamin’ny zoma faha 11 septambra, tokony ho tamin’ny 06 ora hariva tao amin’ny alam-bararata manakaiky ny sekoly fianarana iray tao an-tampon-tanàna ireo andian-jiolahy mpisoloky.
Araka ny fantatra dia misandoka ho manana merkiora na “mercure” izy ireo, ka izany no entina amitahana olona maro mba hahazoana volabe. Raha ny fanazavana hatrany dia olom-boafidy miisa roa tao an-toerana no efa lasibatr’izy ireo ka vola mitentina 27 tapitrisa Ariary ny fitambaran’ny azon’izy ireo tamin’izany. Ny olom-boafidy iray nakan’izy ireo vola mitentina 12 tapitrisa Ariary, ny faharoa kosa nahazoany 15 tapitrisa Ariary.
Araka ny tatitra avy amin’ireo Zandary mpanao famotorana ihany dia nanazava fa ataon’ireo olon-dratsy mihitsy izay haharesy lahatra ny olona resahiny mba hahazoany volabe. Mody asainy manao fanandramana ireo olona roboka mba tena hino tokoa fa merkiora tena izy ilay amidiny, ka asainy mitondra tsanganolona, anana, voatabia, brike ary toaka mena. Rehefa tonga ny fotoana dia nitondra zavatra iray lehibe sahala amin’ny tavoahangy irony indray ireto jiolahy, hidiany tsara ao anaty harona plastika, ka afangarony asidra sy tantely ary ireo zavatra nampitondrainy ny mpividy mba hiteraka entona sy hipoaka. Etsy ankilany mbola nampandoaviny sarany ny fanandramana ka alainy ho azy ireo kosa ny tsanganolona. Voarebireby tokoa noho izany ireo mpividy ka dia roboka ary mandoa ireo vola be an-tapitrisany. Marihina anefa fa hosoka sy fisolokiana tanteraka ny nanjo azy ireo. Rehefa tonga any an-trano mantsy vao talanjona fa vatan’akondro ity lazaina fa merkiora.
Hatreto dia mitohy ny fanadihadiana atao amin’ireo andiany voasambotra tamin’ny faran’ ny herinandro lasa teo iny, roa hafa naman’izy ireo kosa amin’izao fotoana izao no efa nidoboka am-ponja. Manentana ny mponina ao Betroka sy ny manodidina mandrakariva moa ny Zandary mba samy ho mailo ka tsy ho voarebirebin’ny lainga tsara lahatra ataon’ireto mpisoloky ireto.
Mametraka ahiahy sy fahamailoana tanteraka ireo olom-pirenena FANOMEZANA ZOM-PIRENENA HO AN’NY VAHINY (2676) 8 juin 2021 Hamaritra ny ho avin’ny mpanazatra vaovao ny lalao hatrehan’ny Barea manaraka FAMPIVONDRONANA (114) 8 juin 2021 Mponina an-jatony eny Antanandrano tandindomin-doza OLANA AMINA TANY MIREFY 30 HA (113) 8 juin 2021 ALAKAMISY 3 JONA - ALAROBIA 9 JONA 2021 (105) 8 juin 2021 Tena fanoitra amin’ny fampandrosoana saingy be sakantsakana SEHA-PIHARIANA VOLAMENA (104) 8 juin 2021